समाजका दीन दुःखी, पीडित तथा बेसाहारा महिलाहरूकाे सम्मानसाथ सेवा गर्ने उद्देश्यमा तल्लिन रिमा साइराम! (तस्विरहरू सहित) – KhabarTime
रिमा साइरा सेवा घर बन्दै
काभ्रेमा बुवा स्व चेतनाथ सापकोटा र आमा दुर्गा सापकोटाकाे कोखबाट जन्मिएर राजधानीलाई कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएकि एक समाजसेवी पात्र हुन रिमा सापकाेटा ‘साईराम’ । बिगत ११ बर्षदेखि मैले चिनेकाे नाम हाे रिमा साइराम । वहाँसँगकाे पहिलो भेट विदेशी भूमि इजरायलकाे तेलअभिवमा भएकाे थियो । मान्छेलाई जिन्दगीका अनेकन आरोह अवारोह पार गर्ने क्रममा दृश्य तथा अदृश्य कारणहरूले विदेशी भूमि टेक्न बाध्य बनाउँछ । त्यसो त नेपालीहरूकाे अर्को कर्म नै विदेशीहरूका लागि पसिना बेच्नु हाे भन्दा फरक नपर्ला ।
इजरायल पुग्नुभएकि रिमा साइराम इजरायलकाे तेलअभिवमा अवस्थित सत्य साई केन्द्रमा जानेक्रममा भेट भएको हाे । स्पष्टबक्ता, मिजासिलो ब्यवहार, सधै मुसुक्क हाँसेर बोल्ने बानी अनि सहयोगी भावना, यो भन्दा धेरै मान्छेमा हुनु पर्ने गुण कहाँ पाइन्छ र? अति सहयोगी भावनाकि रिमा साइरामकाे भित्री कथा व्यथा केहि थियो या थिएन त्यो चासोकाे बिषय थिएन । हिजाेका कारण भविष्य अंधकार हुनुहुदैन भन्ने त सबै मानिसकाे सोच हुन्छ नै । तर यी यावत कुराहरू गाैंण थिए, फिक्का थिए रिमा साइरामकाे अगाडि ।
बिदेशी भूमि इजरायलमा सँसारकाे भन्दा भिन्न धर्म वा धर्मावलम्बीहरूकाे बसोबास भएकाे देश हाे । इजरायल केवल यहुदीहरूकाे राज्य हाे । धर्मलाई एकातिर राखेर शक्तिमा पनि अगाडि रहेका देश हाे । यहाँ धर्म यसकारण जोडिएकाे छ कि यहुदीहरूकाे हरेक शनिबार पर्व नै हाे । शनिबार उनिहरूकाे विदा रहेकाले प्राय कामदारहरूकाे पनि शनिबार नै विदा हुन्छ र यहि शनिबार तेलअभिवमा स्थापना गरिएकाे सत्य साई केन्द्रमा साईबाबाकाे पुजा तथा भजन किर्तन गरिन्छ ।
अब फेरि यो यस अर्थमा जोडिएकाे छ कि यहि साई केन्द्रमा पुजा तथा भजन किर्तन गर्ने क्रममा रिमा साइरामसँग भेट भएकाे हाे । वहाँसँग खासै धेरै भेटघाट पनि हुन सकेन । तर वहाँ साईराम भक्त भएकै कारण साइकेन्द्रबाट जोडिएका साइराम सम्बन्धबाटै परिचित थियाैं ।
इजरायलमा धेरै समय भेटिइरहन पाइएन किनकी वहाँ अर्काे बर्ष नै इजरायललाई बीट मारेर फर्कनुभयो । नेपालमा आएपछि भने त्यति सम्पर्क हुन सकेन । वहाँकाे सहयोगी भावना भने बढ्दो थियो । वहाँ नेपालमा पनि बृद्धाश्रममा सेवा दिन, दुःखीहरूकाे सेवा गर्न सधै तत्पर रहनुहुन्थ्यो । विशेषतः २०७२ सालकाे भूकम्पमा वहाँले दिनुभएकाे सेवा अतुलनीय छाप बनेर रहेकाे छ । वहाँ विहान बेलुकि बृद्धाश्रममा पनि सेवा दिनुहुन्थ्यो भने इजरायलबाट आएका सहयोगी टोलीहरूसँग भूकम्पपीडितहरूका लागि पनि उत्तिकै खटिनुहुन्थ्यो ।
भूकम्पमा सहयोग गर्न आएका इजरायली टोलीहरू सँग रिमा साइराम
सेवा, सहयोग भनेकाे वहाँकाे अर्को जिन्दगी हाे । सेवाकै लागि हिमालय बृद्धाश्रममा रातदिन नभनि खटिरहनुभएकि रिमा साइराम राजधानी वा राजधानी बाहिर कसैले दुःख पाएकाे भिडियो आउनासाथ लाै न त्यहाँ यस्तो अवस्थामा भेटिनु भएकाे यी पीडितलाइ सहयोग गर्नु पर्छ भनेर लागिपरिहाल्नु हुन्थ्यो । उसो त बाग्लुङका एक ब्यक्तिले विदेशमा काम गर्दा विरामी भएर फर्केपछि टाउकाे हल्लिइरहने र उनलाइ सानी छोरीले हेरचाह गरेका भिडियो आएपछि आफै राजधानी बोलाएर उपचार गराउन, आफै पीडितहरूकाेमा पुगेर सेवा दिन तल्लिन भइरहनुहुन्थ्यो ।
सहयोगकाे कुरा गरिरहँदा हरेक सहयोगकाे डायरी बनाउने हाे भने रिमा साइरामका २, ४ सय डायरी भरिइसक्थे । कति कथा, उपन्यास बनेर निस्किइसक्थे । तर साइराम सहयोगलाई कहिल्यै इतिहाँस बनाउन चहानुभएन । सहयोग जहिले पनि बर्तमान हाे भनेर अग्रसर बनिरहनु हुने वहाँकाे स्वभावले सबै माझ परिचित हुनुभएकि छ ।
रिमा सापकाेट ‘साइराम’ काे पछिल्लो सहयोगी क्रियाकलाप बर्णन गरेर नसकिने छ । सँसारभर फैलिएकाे कोरोना (नोबेल कोभिड-१९) भाइरसकै कारण अचानक चैत्र ११ गतेदेखि शुरू भएकाे लकडाउन र यसपछिका विपदकाे घडिमा घर जान पनि नसक्ने र दिनरात मेहनत गरेर कमाएर गुजारा चलाउने परिवारहरूकाे घरमा अगेनो बल्न छाड्यो । हजाराै हजार मोफसल बाहिरबाट आएर राजधानीमा काम गर्ने मजदुरकाे बेहाल हुन थाल्यो । २, ४ दिनदेखि खान नपाएर भोकभोकै भएका मानिसहरू देखि लिएर चराचुरूङ्गी र जनावरहरूकाे समेत सेवामा दिनरात खटिनुभयो ।
लकडाउनका बेला भोकाहरूका लागि खाना तैयार गर्दै साइराम
यस्तो विपदकाे घडिमा सरकार विहिन जस्तै बनेकाे राजधानीमै भोकाहरूकाे पेट भर्न तल्लिनरहनुभएकि साइराम भक्तपुर, ललितपुर र काठमाण्डाैका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेर खाना बाँड्ने, राहत दिने गर्नुभयो । यति मात्रै कहाँ हाे र? यस्तो बेलामा बिरामी परेकाहरूलाई समेत अस्पताल लैजाने, ल्याउने, उपचार खर्च, खाने बस्ने व्यवस्था मिलाएर समेत सेवा दिनु भएकि रिमा साइराम जिउँदो देवी हुनुहुन्छ ।
लकडाउनमा भोकाहरूलाइ खाना खुवाउँदै साइारम
यस्तो महामारी भाइरसको प्रकोपमा पनि आफ्नो भन्दा गरिब पीडित भोको पेट हुनेहरूको लागि रात दिन घाम पानी नभनी निस्वार्थ सेवा र सहयोग गर्न सधै एक पंक्ति अगाडि सर्ने सहयोगी भावनाको रूपमा देखिनु भएकि जिउँदो भगना रिमा सापकाेटा साइरामको चहाना विस्तारै साकार हुदैछ । वहाँकाे रिमा साइराम सेवा घर स्थापना गर्ने इच्छा, जो अब विस्तारै अगाडि बढिरहेकाे छ र एकदिन अवस्य पुरा हुने छ । वहाँकाे यस अभियानमा नैतिक, समाजिक, भाैतिक तथा आफुले सकेकाे सेवा र सहयोग गर्नु हामी सबैकाे कर्तव्य बन्न आउँछ ।
यतिबेला उच्च समानका साथ रिमा साइरामकाे यस अभियानका लागि देश विदेशमा रहनुभएका सहयोग मनका धनि नेपालीहरूहरूसँग यो जानकारी दिन पाउँदा खुशी त एकातिर छदैछ, अर्कातिर गर्व लागेर आउँछ र भन्न मन लाग्छ देशविदेशमा रहनुभएका सहयोगी मनका नेपालीहरू जति सकिन्छ सहयोग गराै, मानव सेवा नै माधव सेवा हाे ।
रिमा साइराम सेवा घरका लागि जो जस्ले यो स्थान दिएर सहयोग गर्नु भएकाे छ, वहाँ पनि अदृश्य भगवान नै हुनुहुन्छ । वहाँ प्रति पनि हृदय देखि नै उच्च सम्मानका साथ हार्दकि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
यसरी जुट्दै रिमा साइराम तथा सहयोगीहरू
हरि मानन्धर “विवश”, काठमाण्डाैं ।
तीन दिन लगातार वर्षा हुने, बाढी पहिरोको जोखिम उच्च, सतर्कता अपनाउन सबै नेपालीमा अनुरोध!
नेपालीलाई फाइदा दिलाउन एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाई भएकाे अमेरिकाकाे दावी